Mipiro paTemberi Munguva yaJesu, uye Kururama Kwenhoroondo dzaRuka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mongolian Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mipiro yepatemberi yaiunganidzwa sei munguva yaJesu?
Midziyo yokuisa mari patemberi yaiva muChivanze Chevakadzi. Bhuku rinonzi The Temple—Its Ministry and Services rinoti: “Paiva nevharanda diki rainge rakatenderedza [temberi], iro raiva nemidziyo 13 yokuisira mari yainziwo ‘mabhosvo,’ yaiva pamadziro.”
Midziyo yacho yainzi mabhosvo nokuti yaiva yakatetepa kumusoro uye yakafara nechepasi. Mudziyo mumwe nomumwe waiva wakanyorwa zvaizofanira kushandiswa mupiro wacho uye mupiro wacho waibva wachengeterwa basa iroro chete. Jesu aiva muChivanze Chevakadzi paakaona vanhu vakawanda, kusanganisira chirikadzi yaishayiwa, vachikanda mari yezvipo.—Ruka 21:1, 2.
Midziyo miviri yokutanga yaiiswa mari yemutero wetemberi. Mumwe mudziyo waiiswa mutero wegore iroro uye mumwe wacho waiiswa wegore rakapfuura. Mumudziyo wechi3 kusvika kune wechi7 ndimo maiiswa mari yaichajwa yemagukutiwa, hangaiwa, matanda, rusenzi uye zvinhu zvendarama. Kana munhu akanga achengeta mari yakawanda kupfuura yemupiro waichajwa wezvaaida kuzopa, aizokanda yainge yasara yacho mune mumwe wemidziyo yaivapo. Mudziyo wechi8 waiva wemari inenge yasara pazvinopiwa zvezvivi. Mumudziyo wechi9 kusvika kune wechi12 maiiswa mipiro inenge yasara pazvinopiwa zvemhosva, pakubayira shiri, pazvinopiwa zvevaNaziri, uye pazvinopiwa zvevainge vacheneswa pamaperembudzi. Mudziyo wechi13 waiiswa zvipo zvaipiwa nevanhu vachizvidira.
Munyori weBhaibheri anonzi Ruka akanyora nhoroondo dzakarurama here?
Ruka akanyora Evhangeri inoshevedzwa nezita rake uye bhuku raMabasa Evaapostora. Ruka anotaura kuti “akatsvaka zvinhu zvose nenzira yakarurama kubvira pakutanga,” asi dzimwe nyanzvi hadzina chokwadi nezvaakanyora. (Ruka 1:3) Saka nhoroondo dzake dzakarurama zvakadini?
Nhoroondo dzakanyorwa naRuka dzinoratidza kuti ndedzechokwadi. Somuenzaniso, akashandisa mazita okuremekedza evakuru vakuru veRoma aisanyanyozivikanwa, aishandiswa kune vamwe vakuru vakuru vehurumende vaiva muFiripi; vatongi vekuTesaronika; uye varume vaitungamirira muEfeso. (Mabasa 16:20, Kingdom Interlinear; 17:6; 19:31) Ruka akataura nezvaHerodhi Andipasi achimuti aiva mutongi weruwa, uye Segiyo Paurosi akamuti mutongi weruwa rweKupro.—Mabasa 13:1, 7.
Kushandisa kwakaita Ruka mazita aya kunokosha nekuti paichinjwa nharaunda yeRoma, madanirwo aiitwa mutungamiriri wacho aichinjawo. Imwe nyanzvi yeBhaibheri inonzi Bruce Metzger yakati, “mazita ari muna Mabasa anonyatsoratidza kuti akarurama zvichienderana nenzvimbo nenguva zvinenge zvichitaurwa.” Nyanzvi inonzi Wil­liam Ramsay yakataura nezvaRuka ichiti aiva “munyori wenhoroondo wemandorokwati.”
Waizviziva Here?—January 2014